नातेदार नेताको कस्तो छ सम्बन्ध ? - Naya Patrika
नेपाली राजनीतिमा एउटै परिवारबाट पार्टी राजनीति गर्नेको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम छ । कांग्रेस राजनीतिमा कोइराला परिवार, गणेशमान सिंह र महेन्द्रनारायण निधिको परिवारमा राजनीतिक पुस्तान्तरण देखिन्छ । तर, कम्युनिस्ट राजनीतिमा त्यतिसम्मको पुस्तान्तरण देखिन्न । एउटै परिवारका सहोदार नातेदारको संख्या भने राजनीतिमा कमै देखिन्छ ।
भनिन्छ, परिवार पहिलो पाठशाला हो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसहित विभिन्न राजनीतिक दलमा अहिले क्रियाशील जति पनि नेताहरू छन्, उनीहरू पारिवारिक वातावरणकै कारण आफू राजनीतिमा अग्रसर भएको बताउँछन् । त्यसो त, राजनीतिमै मन मिलेर जोडी बाँधिने नेता र सांसदहरू पनि थुप्रै छन् ।
त्यस्ता अधिकांश नेता प्रायः एउटै पार्टीमा क्रियाशील छन् । राजनीतिक क्रियाशीलतामा जोडी बाँधिएकाहरूको सम्बन्ध सुमधुर रहे पनि सहोदर दाजुभाइ, दिदी–बहिनी, दाजु–बहिनीको नाता–सम्बन्ध रहेका धेरै नेताहरूको पारिवारिक सम्बन्ध भने खटपट छ । कतिपयमा को अघि बढ्ने ‘इगो पोलिटिक्स’ पनि बाहिरै प्रकट हुने गर्छ । पारिवारिक जमघटमा अधिकांश नातेदार नेताहरू राजनीतिक सरसल्लाह कमै गर्छन् । पार्टीभित्रको राजनीतिमा एउटै गुटमा रहेका नातेदार नेताबीच पनि को अघि बढ्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ ।
सन्तुलनकारी सम्बन्धमा पाण्डे दाजुभाइ
एउटै गुटबाट उपाध्यक्ष र महासचिवमा नवौँ महाधिवेशनमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दाबाहेक राजेन्द्र र सुरेन्द्र पाण्डे दाजुभाइबीचको सम्बन्ध अन्य नेताहरूको तुलनामा राम्रो छ । राजेन्द्रका भाइ सुरेन्द्र पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले स्थायी समिति सदस्य हुन् । पूर्वस्थानीय विकासमन्त्री राजेन्द्र पोलिटब्युरो सदस्य छन् । नवौँ महाधिवेशनमा भने आपसी सल्लाहविना अघि बढ्दा झिनो मतान्तरमा पराजित भएको निकटवर्तीहरूको भनाइ छ । यद्यपि, उनीहरू त्यसबारे खासै खुलेर बताउने गर्दैनन्, न त त्यसवेलाको परिणामबारे गम्भीर समीक्षा नै गरेका छन् ।
पछिल्लो निर्वाचनपछि प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी रहेका राजेन्द्रलाई संस्थापन र नेपाल गुट दुवैले नपत्याएपछि गुटगत राजनीतिबाट सम्पर्क विच्छेदमा छन् । पार्टी विभाजनताका आफूलाई माले बन्नबाट रोकेका कारण भाइ सुरेन्द्रलाई दाइ राजेन्द्र खुलेरै राजनीतिका गुरु भन्छन् । त्यति मात्र होइन, कुनै विषयमा गहिराइमा पुगेर सिलसिलेवार रूपमा तथ्यपरक भाषण गर्ने सुरेन्द्रको शैलीको राजेन्द्र प्रशंसक हुन् । तैपनि यी दुई दाजुभाइबीच राजनीतिक विषयमा भने कमै छलफल हुने गरेको बताइन्छ ।
महत दाजुभाइबीच बोलचाल नै बन्द
कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत र डा. प्रकाशशरण महत सहोदर दाजुभाइ हुन् । यी दुवै अहिले कांग्रेसमा केन्द्रीय सदस्य छन् । नुवाकोटबाट राजनीति सुरु गरेका महत दाजुभाइ पार्टीभित्र एउटै गुटमा छैनन् । दाइ महत रामचन्द्र पौडेल र भाइ महत संस्थापन समूहमा छन् । पछिल्ला चुनावमा एकले अर्कोलाई असहयोग गरेको भन्दै बोलचाल नै बन्द गरेका यी दुईबीच अहिले पार्टीमा आ–आफ्नो समूहबाट को पदाधिकारी बन्ने प्रतिस्पर्धा पनि छ । भाइ महत सहमहामन्त्री मनोनीत भएका छन् । डा.रामशरण महामन्त्रीका दाबेदार थिए ।
०४६ पछि डा. रामशरण सबैभन्दा बढी अर्थमन्त्री बने भने प्रकाशरण पनि दुईपटक मन्त्री भइसकेका छन् । तर, पटक–पटक चुनाव लड्दा एकअर्कामा सहयोग गरेनन् । गृहजिल्ला नुवाकोटमा पटक–पटक निर्वाचन क्षेत्रबाट जित्दै आएका रामशरणले पछिल्लो निर्वाचनमा पनि टिकट हत्याएपछि प्रकाशरण काठमाडौं–५ मा चुनाव लडे, तर एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग पराजित भए । त्यसो त, रामशरण पनि पराजित भएपछि उनीनिकट नेता–कार्यकर्ताले हारको कारण जिल्लामा अर्जुननरसिंह केसी समूह र प्रकाशशरणलाई लगाए । ‘जिल्लामा दाइ उठेका कारण प्रकाशशरणले सहयोग गर्नुपथ्र्यो, तर को अघि बढ्ने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले असहयोग गरे,’ कांग्रेसका एक जिल्ला नेता भन्छन्, ‘त्यसपछि उहाँहरूबीच आवतजावत त परै जाओस्, खासै बोलचालसमेत हुन छाडेको छ ।’
त्यसो त, प्रकाशशरण पनि दाइसँगको राम्रो–नराम्रो सम्बन्धबारे खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । ‘पारिवारिक सम्बन्धको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, राजनीतिक सम्बन्ध आफ्नै ठाउँमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यी दुई विषयलाई जोडेर खासै बताइरहनु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन ।’
एउटै पदका दाजु–बहिनीमा संवादहीनता
महेन्द्र पाण्डे र बिन्दा पाण्डे दाजु–बहिनी एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य छन् । महेन्द्र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री हुन् भने बिन्दा एमालेभित्र अध्ययनशील उदीयमान महिला नेतृका रूपमा परिचित छिन् । तर, यी दुईबीच पारिवारिक कुराकानी पनि कमै हुने गर्छ भने राजनीतिक विषयमा चाहिँ संवादहीनताकै स्थिति छ । ‘हामीबीच राजनीतिक विषयमा कुराकानी हुन्न, राजनीतिक विषय त राजनीतिक पार्टीभित्र हुने कुरा हो,’ बिन्दा भन्छिन्, ‘अलिअलि पारिवारिक कुराकानी हुन्छ ।’ बिन्दालाई राजनीतिक मामिलामा अघि बढ्ने सन्दर्भमा भने महेन्द्रले प्रेरित गर्दै आएका छन् ।
ज्ञवाली दाजुभाइको राजनीति तीनतिर
एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, केन्द्रीय सदस्य रामकुमार ज्ञवाली र प्रदेश ५ का नेता लक्ष्मण ज्ञवाली सहोदर दाजुभाइ हुन् । राष्ट्रिय नेताको छवि बनाएका एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवाली एकपटक मन्त्री पनि भइसकेका छन् । केन्द्रीय सदस्य रामकुमार केन्द्रीय राजनीतिमा बिस्तारै अघि बढिरहेका छन् । तर पुस्तैनी घर गुल्मीमा हुर्किएका यी तीन दाजुभाइ अहिले तीनतिरबाट राजनीति गर्छन् ।
युवराज र रामकुमारले तीसको दशकबाटै सँगसँगै राजनीतिक जीवन सुरु गरे पनि लक्ष्मण भने अलिपछि मात्र क्रियाशील हुन थालेका हुन् । युवराजले दाङ, रामकुमारले कञ्चनपुर र लक्ष्मणले बर्दियालाई राजनीतिक थलो बनाएका छन् । तीनतिर राजनीतिक क्षेत्र बनाएका यी दाजुभाइबीच पारिवारिक भेटघाट र राजनीतिक कुराकानी पनि कमै हुने गर्छ । कञ्चनपुरबाट पार्टी कामले काठमाडौं आइरहने रामकुमार दाजु युवराजकहाँ कम जान्छन् । समय व्यवस्थापन गर्न नसकिएका कारण दाजुको घरमा नगए पनि पारिवारिक सम्बन्धमा भने खटपट नरहेको उनले बताए ।
मिलेको जोडी अमृत र अष्टलक्ष्मी
एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा चार दशकभन्दा बढी समयदेखि पार्टी राजनीतिमा क्रियाशील छन् । भूमिगतकालमै यी दुईबीच जनवादी विवाह सम्पन्न भएको थियो । दुवै पूर्वमन्त्रीसमेत हुन् । घरायसी मामिला मात्र होइन, राजनीतिक मामिलामा समेत यी दुईले आपसी परामर्श गर्छन् । कम्युनिस्ट शैलीमै यी दुईले घरायसी काम र समस्या पनि आपसी समझदारीबाटै हल गर्छन् । खाना पकाउने, सरसफाइ गर्नेदेखि चिया पकाउनेसम्मका काम दुवैले मिलेर गर्छन् । एमालेभित्र लामो समयसम्म संस्थापन समूहमा रहेको अमृत र अष्टलक्ष्मीको जोडी यसपटक मात्र नेता माधवकुमार नेपाल समूहमा छ । दुवै निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय रहे पनि सांसद बन्ने मामिलामा एउटै परिवारका दुईजना बनाइएको भन्दै उनीहरूको आलोचना भएको थियो । यसपटक भने अमृत पार्टीको जिम्मेवारीमा छन् भने अष्टलक्ष्मी प्रदेश ३ की सांसद छिन् ।
भाइका लागि दिदीको त्याग
माओवादी नेतृ देवी खड्का र प्रदेश ३ का सांसद विशाल खड्का दिदीभाइ हुन् । दुई दिदीभाइको राम्रो सम्बन्ध रहेकाले गृहजिल्ला दोलखामा पार्टीभित्र पनि उनीहरूको राम्रो पकड छ । पूर्वभौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री देवी पोलिटब्युरो सदस्य छिन् भने विशाल माओवादी केन्द्रको जिल्ला पूर्वसंयोजक हुन् । ०६४ मा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित देवीले सहयोग गरेकै कारण पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीबाट टिकट लिएर विशाल प्रदेश सांसद बनेको उनीनिकट नेता–कार्यकर्ता बताउँछन् । उनीहरूका सहोदर दाजु तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य रितबहादुर खड्का द्वन्द्वकालमा मारिएका थिए । जिल्ला र केन्द्रीय राजनीतिका विषयमा यी दिदीभाइबीच सामान्यभन्दा सामान्य विषयमा पनि कुराकानी हुने गरेको छ । भाइ विशालले पनि दिदीको सल्लाह–सुझाब र निर्देशनलाई कहिल्यै अस्वीकार गर्ने गरेका छैनन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व बनाइसकेका देउवाकी श्रीमती डा. आरजु राणा देउवा पनि डेढ दशकयता मात्र पार्टीमा क्रियाशील छिन् । यद्यपि, देउवाकै बलमा आरजु ०७० को निर्वाचनमा समानुपातिक सांसद बनिन् । देउवाकै चाहनामा आरजु कैलाली–५ बाट पछिल्लो निर्वाचनमा संघीय संसद्मा उम्मेदवार बने पनि पराजित भइन् । अहिले आरजुलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्ने र आफू सक्रिय रहँदै पदाधिकारी बनाएर उत्तराधिकारी बनाउने चाहना देउवामा छ ।
देउवाको धेरै निर्णय आरजुबाट प्रभावित हुने गरेकोसमेत बताइन्छ । खासगरी देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ‘फस्र्ट लेडी’ का रूपमा आरजुले विभिन्न निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको चर्चा चल्ने गर्छ । त्यस्तै, पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णयमा समेत आरजुले प्रभाव जमाउन खोज्ने गरेको धेरै केन्द्रीय सदस्यहरू अनुभव सुनाउने गर्छन् ।
सिन्धुलीबाट तीसको दशकबाट भूमिगत राजनीति सुरु गरेर राष्ट्रिय व्यक्तित्व बनाएका वाम नेता सिपी गजुरेल र हरिबोल गजुरेल सहोदर नभए पनि एउटै बाजेका नाति हुन् । उमेरमा सिपी दाइ हुन् भने हरिबोल भाइ । भूमिगतकाल ०४३ को सेक्टर काण्डपछि महामन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धामा प्रचण्डसँग टक्कर परेपछि सिपी कहिल्यै उनीनिकट भएनन् । त्यसयता सिपी फरक कित्तामा रहे पनि भाइ हरिबोलले पछिल्लोपटक पार्टी विभाजन हुँदासम्म उनलाई साथ दिएनन् । अहिले हरिबोल माओवादी केन्द्रको सचिवालय सदस्यका रूपमा प्रचण्डको विश्वासपात्र नेता छन् भने सिपी मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको नेता छन् ।
एकीकृत पार्टी हुँदा ०६४ को निर्वाचनमा सिन्धुली–२ बाट दुवैजना चुनाव लड्न चाहन्थे, तर टिकट सिपीले फुत्काए, हरिबोलको नामै सिफारिस नभएपछि दाजुभाइबीचको सम्बन्ध झन् चिसिएको निकटवर्तीहरू बताउँछन् । ‘सम्बन्ध चिसो रहेकैले पारिवारिक जमघटमा जम्काभेटबाहेक खासै दोहोरो आवतजावत छैन,’ दुवैलाई नजिकबाट चिन्दै आएका एक कार्यकर्ताले भने, ‘उहाँहरूबीच फोन सम्पर्क पनि हुन्न, को–कस्तो भन्ने राम्ररी बुझेकाले उहाँहरूबीच इगोको टस्सल अलि बढी नै छ ।’ त्यसो त सिपीले वैद्यको साथ छाडेका छैनन् भने हरिबोलले प्रचण्डको ।
राजनीतिको केन्द्र बन्न प्रयासरत कोइराला परिवार
कृष्णप्रसाद कोइरालाका पाँच पुत्र बिपी, मातृका, केशव, तारणी र गिरिजाप्रसाद ००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाटै लागेका कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू हुन् । यी पाँचै नेताको अवसानपछि कांग्रेसभित्र उत्तराधिकारीका रूपमा दोस्रो पुस्ता अघि बढिरहेको छ । बिपीका कान्छा पुत्र डा. शशांक १३औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेस महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै, केशवपुत्र डा. शेखर मात्र होइन, गिरिजाप्रसाद पुत्री सुजाता पनि केन्द्रीय तहमा प्रभावशाली हैसियतमा छन् । महामन्त्री शशांकसहित तीनै नेता रामचन्द्र पौडेल समूहबाट महाधिवेशनमा निर्वाचित भए पनि कोइराला परिवारको बिरासत कायम गर्न छुट्टै शक्तिकेन्द्रका रूपमा अघि बढ्ने प्रयासमा छन् । यद्यपि, यी तीनै नेताबीच को अघि बढ्ने प्रतिस्पर्धा रहेकाले सुमधुर सम्बन्ध भने छैन । तर, १३औँ महाधिवशेनबाट आफ्नो पारिवारिक बिरासत गुमेपछि मिलेरै पुरानो बिरासत फर्काउने रणनीतिमा छन् । यसका लागि उनीहरूले तीनपटकसम्म ‘लन्च मिटिङ’ गरिसकेका छन् ।
सुमधुर सम्बन्धले नुवाकोटमा केसी दाजुभाइको दबदबा
एउटै पार्टी राजनीतिमा सुमधुर सम्बन्ध भएका उदाहरणीय पात्र हुन्– अजुर्ननरसिंह र जगदीश्वरनरसिंह केसी । ६ दाजुभाइमा अर्जुन जेठा र जगदीश्वर परिवारका कान्छा भाइ हुन् । राष्ट्रिय र पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभावशाली भूमिका बनाएका अर्जुनले भाइको राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आएका छन् । नुवाकोटको राजनीतिमा रामशरण महत र अर्जुननरसिंहको छुट्टाछुट्टै समूह छ । तर, पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा प्रायः अर्जुनरसिंहले नै पकड जमाउँदै आएका छन् । दाइकै सहयोगमा जगदीश्वर नुवाकोटमा लगातार तीनपटक कांग्रेस जिल्ला सभापति बनिसकेका छन् । चाडपर्वमा मात्र होइन, अन्य वेलासमेत बाक्लो आवतजावतको वातावरण बनाइरहेका यी दाजुभाइले राजनीतिमा अन्य दाजुभाइलाई समेत डाकेर परामर्श र सहयोग लिने गरेको निकटस्थहरू बताउँछन् ।
दाइले पञ्चायतकालदेखि नै पारिवारिक वातावरण दिएको र राजनीतिमा अघि बढ्न प्रेरणा दिएकाले आफू अहिलेसम्मको स्थितिमा आएको जगदीश्वरनरसिंह बताउँछन् । ‘हामी जहिले पनि कठिन परस्थितिको कसरी निराकरण गर्ने, कांग्रेसले लिने बाटोलगायत विषयमा वेलावेला छलफल गर्छौं र निष्कर्षका आधारमै अघि बढ्छौँ,’ उनले भने, ‘जिल्ला र राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा छलफल हुन्छ, प्रजातन्त्रका लागि लड्नुपर्छ भनेर दाइकै कारण घर नै पाठशालाजस्तो बन्यो, सबै दाजुभाइ नेविसंघमै लाग्यौँ, कर्म गरिरहेका र्छौँ । पार्टीभित्र गुट–उपगुटको राजनीति छ, हुक्के, बैठकेलाई माथि तान्ने प्रवृत्ति छ, त्यागको मूल्यांकन छैन, तर पनि बाटो छाडेका छैनौँ ।’ केसी दाजुभाइले जिल्लामा शेरबहादुर र रामचन्द्रको टिम मिल्दा पनि पकड गुम्न दिएका छैनन् ।
अनिललाई “ग्रुमिङ” गर्दै जनार्दन
माओवादी केन्द्रका दुई नेता जनार्दन शर्मा र अनिल शर्मा सहोदर दाजुभाइ हुन् । जनार्दनले माओवादीभित्र प्रभावशाली नेताको हैसियत बनाएका छन् भने अनिल विद्यार्थी राजनीति हुँदै युवा नेताका रूपमा पार्टी राजनीतिमा अघि बढिरहेका छन् । खासमा पिताको स्वर्गारोहण भएकाले जनार्दनले भाइ अनिललाई राजनीतिक रूपमा ‘ग्रुमिङ’ गर्ने कुरामा मात्र होइन, व्यावहारिक पाटोमा समेत अभिभावकीय भूमिका निभाइरहेका छन् । अघिल्लो वर्ष अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धी रहेका अनिल थोरै मतले पराजित भएका थिए । त्यतिवेला ऊर्जामन्त्री रहेका जनार्दनमाथि अर्को समूहले भाइलाई जिताउन सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको आरोपसमेत लगाएको थियो । निकटवर्तीका अनुसार पछिल्लो निर्वाचनमा आफूले रुकुमबाट टिकट पाएपछि जनार्दनले नै भाइ अनिललाई काठमाडौं–१ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न सल्लाह दिँदै टिकटका लागि सहयोगसमेत गरेका थिए ।
केन्द्र र जिल्लामा जमेका खाण दाजुभाइ
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाण र रूपन्देही जिल्ला सचिव रामकृष्ण खाण सहोदर दाजुभाइ हुन् । नेविसंघ र तरुण दलका पूर्वअध्यक्ष बालकृष्ण अहिले कांग्रेस महामन्त्री दौडमा थिए । रामकृष्ण जिल्लामा प्रभावशाली मानिन्छन् । दुवै केन्द्रीय राजनीतिमा नभएका कारण उनीहरूबीच खासै प्रतिस्पर्धा छैन । रामकृष्ण बालकृष्णकै निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा तिलोत्तमा नगरपालिकामा मेयरमा उठेर पराजित भए । जिल्लामा प्रभाव जमाउन बालकृष्णकै बलमा भाइ रामकृष्णले टिकट पाएको पार्टीभित्रकै नेता–कार्यकर्ता बताउने गर्छन् । बालकृष्णले जिल्लामा पकड जमाइराख्न भाइलाई स्थापित गर्नेे प्रयास गरिरहेको वेलाबखत चर्चा चल्ने गरेको छ ।
एमालेभित्रका अन्य जोडी नेता
एमालेमा शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री तथा पार्टी स्थायी समिति सदस्य हुन् भने उनकी श्रीमती सुजिता शाक्य केन्द्रीय सदस्य छिन् । भूमिगतकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय रहेकी सुजितासँग शंकरको प्रेम विवाह भएको थियो । दुवै राजनीतिक मामिलादेखि पारिवारिक मामिलामा आपसी परामर्श गर्छन् । राजनीतिबाट बचेको समय सुजिता मुख्यमन्त्री पोखरेलको दैनिक खानपानदेखि अन्य मामिलामा समेत विशेष रूपमा ख्याल गर्छिन् । कतिपय कार्यक्रममा उनी शंकरसँगै देखिने गरेकी छिन् । कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ र प्रदेश १ की सांसद उषाकला राईको जोडी पनि एमालेको राजनीतिमा सक्रिय छ । युवा संघको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहँदा उनीहरूबीच प्रेम विवाह भएको थियो । युवा संघको राजनीतिदेखि नै उषाकलाले मन्त्री तामाङलाई आर्थिकलगायत थुप्रै मामिलामा धेरै नजिकबाट सहयोग गर्दै आएको उनीहरू खुलेरै बताउँछन् ।
फरक–फरक पार्टीमा बाबु–छोरा
राप्रपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा जयन्त चन्द सोही पार्टीका महामन्त्री हुन् । राप्रपाको पछिल्लो विभाजनपछि स्व. सूर्यबहादुर थापाले सुनीलबहादुर थापालाई राजनीतिमा अघि सारेपछि लोकेन्द्रले पनि पुत्र जयन्तलाई अघि सारे । करिब डेढ दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय जयन्तलाई स्थापित गर्न लोकेन्द्रबहादुर अझै क्रियाशील छन् । उता, ईश्वरी दाहाल ‘असारे काका’ र महेश्वर दाहाल लामो समयदेखि वाम राजनीतिमा क्रियाशील छन् । तर, पिता असारे काका अहिले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उच्च तहको नेतृत्वमा छन् भने महेश्वर माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य छन् ।
सहोदर नातेदार दुई श्रेष्ठ सांसद
एमाले केन्द्रीय कमिटीमा सहोदर नातेदार दुईजना केन्द्रीय कमिटी सदस्य छन् । कृष्णगोपाल श्रेष्ठ केन्द्रीय कार्यालय सचिव छन् भने उनकी श्रीमती विना श्रेष्ठ केन्द्रीय कमिटी सदस्य । विनाका भाइ विनोद श्रेष्ठ पार्टीकै पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा एमालेको प्रभावशाली भ्रातृ संगठन नेपाल ट्रेड युनिय महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष छन् । अहिले यी तीनमध्ये कृष्णगोपाल र विना सांसद छन् । ‘एउटै परिवारको भए पनि राजनीतिका विषयमा निकै कम कुराकानी हुन्छ,’ विनोद भन्छन्, ‘राजनीति एकातिर, घरपरिवार अर्कैतिर, कहिलकाहीँ जल्दोबल्दो तात–तातो विषयमा मात्र प्रसंगवश भेटघाटमा कुराकानी हुन्छ ।’
#नातेदार नेताको कस्तो छ सम्बन्ध ?